China Marbofloxacin Injection 10% ifektri abakhiqizi | U-Lihua
I-AdvaCare ingumkhiqizi we-GMP weMarbofloxacin Injection.
IMarbofloxacin iyi-antibiotic yokwenziwa, ebanzi ebanzi ngaphansi kwesigaba somuthi we-fluoroquinolone. Isetshenziselwa ukwelapha uhla lwezifo ezibucayi ezibangelwa amagciwane.
Indlela eyinhloko yokusebenza kweMarbofloxacin ukuvimbela ama-enzyme ebhaktheriya, okugcina kuholele ekufeni kwamagciwane.
Ezinkomeni, isetshenziswa ekwelapheni izifo zokuphefumula ezibangelwa izingcuphe ezithintekayo zePasteurella multocida, Mannheimia haemolytica ne-Histophilus somni. Kunconywa ekwelapheni i-mastitis ebangelwa i-Echerichia coli strains engangenwa yiMarbofloxacin ngesikhathi sokuncelisa.
Ezingulubeni, isetshenziswa ekwelapheni iMetritis Mastitis Agalactia Syndrome (i-MMA syndrome, i-postpartum dysgalactia syndrome, i-PDS) ebangelwa amagciwane atholakala kuMarbofloxacin.
Ezinkomeni kukhonjiswa ekwelapheni izifo zokuphefumula ezibangelwa izingcuphe ezithintekayo zePasteurella multocida, Mannheimia haemolytica ne-Histophilus somni. Kunconywa ekwelapheni i-mastitis ebangelwa i-Echerichia coli strains engangenwa yi-marbofloxacin ngesikhathi sokuncelisa.
Ezingulubeni kukhonjiswa ekwelapheni i-Metritis Mastitis Agalactia Syndrome (MMA syndrome, postpartum dysgalactia syndrome, PDS) ebangelwa amagciwane atholakala ku-marbofloxacin.
Ukutheleleka kwamagciwane ukumelana namanye ama-fluoroquinolones (ukumelana esiphambanweni). Ukuphathwa kwemithi esilwaneni okwakutholakala ukuthi kunesifo sokuzwela ngokweqile ku-marbofloxacin noma enye i-quinolone kuyaphikisana.
Umthamo onconywayo ngu-2mg / kg / ngosuku (1ml / 50kg) womjovo we-marbofloxacin onikezwe ngemisipha emfuyweni noma esilwaneni esihlosiwe, noma yikuphi ukwanda komthamo kufanele kubhekwe ngungoti wakho wokunakekelwa kwezilwane. Umjovo weMarbofloxacin akufanele unikezwe uma kutholakala ukuzwela ngokweqile.
Bheka uchwepheshe wokunakekelwa kwezilwane ukuthola imihlahlandlela kumthamo. Ungadluli lokho abakwelulekayo, bese uqedela ukwelashwa okugcwele, ngoba ukusheshe ume kungadala ukuphindeka noma inkinga yenkinga.
Langaphambilini I-Lincomycin Hydrochloride Injection 10%
Olandelayo: Inaliti ye-Multivitamin
Inaliti ye-Sulfadimidine Sodium 33.3%
Inaliti ye-Sulfadimidine ne-TMP 20% + 4%